Akụkọ - Yuancheng siri ike: Bịa ọzọ
Onwa iri na ise nke iri na ise, 126th Canton Fair bidoro dika emebere ya. Yuancheng Auto Ngwa Manufacturer CO., LTD pụtara ohuru anya na akwụkwọ ngwaahịa lineup.
The ọhụrụ agba agbanwe anyanwụ ndo na n'iru wheel cover usoro, ndị kasị mma na-ere kpochapụwo anyanwụ ndò usoro, ọhụrụ ụgbọ ala ngwa nju oyi usoro, na fashionable ụlọ tent usoro, wdg bụ ndị niile na show show n'ụzọ dị ịtụnanya mata mma.
Banye ụlọ ndò Yuancheng, ị ga-ahụ mpaghara ngwaahịa dị n'èzí ebe a na-etinye refrjiraeto ụgbọ ala akwụkwọ. N'ọnụ ụzọ ahụ, e nwere ụdị ụlọ akpaka na-adọta ndị ọbịa. Ihe na-esote mpaghara ngwaahịa dị n'èzí bụ mpaghara mpaghara ụgbọ ala ime. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-egosipụta ọrụ ndị ahịa nke ngwaahịa a.
Na nke 1, ndị ọbịa kọwara nke ọma arụmọrụ na ntụkwasị obi nke igwe ụgbọ ala Yuancheng. A na-eji akwa chameleon mee ngwaahịa ndị dị n'ime ya dị ka ọta anyanwụ na mkpuchi ihu igwe. Nke a bụ ngwaahịa ọdịnala doro anya, agbanyeghị Yuancheng na-eme ka ọ na-enwu n'ichepụta pụrụ iche.
Na nke atọ, Yuancheng gosipụtara ụlọ elu ụlọ eji eme ihe site na iji akwa ume, ọkụ na UV na-eguzogide ọgwụ, nke dị nfe karịa na arụmọrụ ka mma. Tụkwasị na nke ahụ, Yuancheng ghọtara nzaghachi ahịa ngwa ngwa ma meziwanye ahụmịhe nke ndị na-ere ahịa site na ịme mgbanwe na windo ụlọikwuu.
Site na ngwaahịa ọhụrụ ewepụtara, Yuancheng nwetara nnukwu ewu ewu na Canton Fair a. Yuancheng ụlọ ndò mgbe niile jupụtara na ngwaahịa na-ukwuu ghọtara, adọta ọhụrụ na ndị agadi ahịa na-abịa maka ụka na nkwurịta okwu.
"N'ọdịnihu, anyị ga-anọgide na-agbasi mbọ ike ma na-aga n'ihu itinye ego na R&D, ma gbalịsie ike ịghọ ụdị ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ na njem nlegharị anya na ngwaahịa ntụrụndụ.", Dị ka Xu Mengfei, onye isi oche Yuancheng si kwuo.
12v Car Igwe nju oyi oyi, Car Wine oyi, Mako Car oyi, Carlọ Ulo Ugbo Ala, Kpuchie N'okpuru Car, Obere igwe oyi 12v,